FarsNews Agency - Tehran, Paris Confer on Ways to Contain Coronavirus, Improve Consular Services
Thursday 13 Aug 2020 / Tehran - 01:28 / GMT - 20:58
Sat Mar 07, 2020 1:18
TEHRAN (FNA)- Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif and his French counterpart Jean-Yves Le Drian, in a telephone conversation, exchanged views on how to boost joint efforts against the spread of coronavirus epidemic in the world, and discussed consular services during the time of crisis.
During a phone call late on Friday, Zarif and Le Drian discussed the latest developments surrounding coronavirus outbreak and certain consular issues
Earlier on Friday, Zarif in a message said Iran's embassies in foreign countries are doing their best to return those citizens who have been stranded due to the outbreak of coronavirus.
Since the outbreak of coronavirus in the Middle East and Europe, Iran has called for collective measures to contain the spread of infection, and different Iranian officials have hold talks with their counterparts in the neighboring and European countries to discuss the ways to counter the bio-threat.
Also on Friday, Zarif and his Kuwaiti counterpart Ahmad al-Jaber al-Sabah, in a telephone conversation, voiced their respective governments’ resolution to bolster joint efforts against the spread of the novel coronavirus, COVID-19.
Last Monday, Iranian Foreign Minister and his Turkish counterpart Mevlüt Çavuşoğlu held a phone talk on the recent developments related to the coronavirus outbreak in Iran and the ways to tackle it and the need to maintain and strengthen relationships.
Iran, South Africa Confer on COVID-19 Pandemic